Fandaharana fakan-tsary amin'ny fakan-tsary vita amin'ny vatana sy kilasy | Vahaolana OMG
Fandaharana fakan-tsary sy kilasy famokarana vatana
Efa elaela ihany koa ny fakan-tsary niasan-doko nandritra ny taona vitsivitsy, ary nihodina izy ireo, nandritra ny taona vitsivitsy lasa izay. Ny masoivoho mpampihatra amin'ny lalàna indrindra indrindra ny polisy dia tsy maintsy manao fikarohana bebe kokoa momba ny fanampiana be dia be amin'ny fampiharana ny fakan-tsary amin'ny vatana. Ilaina ihany koa ny fidirana tanteraka amin'ny toe-javatra, hanafoana ny hetsika sasany nefa manova ny sasany hafa. Ny fanamby lehibe izay natao hatrany momba ny fakantsary vatana dia ny olana momba ny tsiambaratelo sy ny tsy fahatokisan'ny fahatokisana amin'ny alàlan'ny rakitsary amin'ny faran'ny farany. Ao amin'ity fanoratantsika ity dia horesahantsika ny tombotsoan'ny fakan-tsary hita ary tokony hojerena haingana ny fandinihana. Ireo mazàna dia manome tolo-kevitra tena azo tsapain-tanana izay mampiseho ny fisaorana sy ny lesona nianarana.
Tombontsoa amin'ny fakan-tsary miorina amin'ny vatana
Ao amin'ny herin'ny polisy izay ampiasain'ireo fakan-tsary ampiasain'ny vatana, misy tombony hoy izy ireo fa ny fakantsary vatana no mitondra ary ny fahatsapana ankapobeny amin'ny ankapobeny no entiny. Ireto misy tombony ireto dia:
Antontan-taratasy momba ny porofo: ny lanjan'ny porofo izay misy ankehitriny hanaovana fanadihadiana sy fanenjehana ihany koa, nanatsara be dia be ny fanaovana azy io. Raha vao jerena amin'ny alàlan'ny dian-tsary ny sary ary aseho, dia mora ny manapa-kevitra momba ireo tranga ireo.
Mangarahara ny masoivoho: amin'ny alàlan'ny mamela ny besinimaro hanana fidirana an-tsary sy horonantsary voarakitra, ny fifandraisan'ny besinimaro sy ny herin'ny polisy dia matanjaka noho ny taloha. Ankehitriny mahita ny hoe mangarahara ny herin'ny polisy ary vonona ny hampiseho azy ireo ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny raharaha iray, dia nanorina fanjakana fahatokisana azy ireo izany.
Toe-javatra miafina: ny fahatsiarovan-tena ataon'ireo olona rehefa fantany fa voarakitra an-tsoratra dia tena nanampy tamin'ny famolavolana toetra tsara teo amin'ny sivily sy ireo polisy. Azo antoka fa te-hanao tsara sy mankato tsara ny rehetra rehefa fantany fa voarakitra an-tsoratra izy ireo, tsy fantatra na iza na iza ny fizahana fanadihadiana izay mety ho ampiasaina amin'izany. Tsara indrindra ny manalavitra ny fitondran-tena ratsy fotsiny mba hisorohana ireo fahasarotana any aoriana.
Famantarana sy fanitsiana ny olan'ny masoivoho anatiny: ny fampiasana ny fantsom-batana dia nanamora ny famoahana ny atody ratsy tamin'ny hery, indrindra indrindra fa ireo izay; ampiasao ny heriny hampahory, ampiasao ny fanamiana polisy mba hahazoana freebies, hampiasa ny fanamiana ho an'ny felaka na hosoka ary hampiasa ny fehiny amin'ny alàlan'ny fahazoana alàlana amin'ny toerana tsy tokony halehany. Ny fananana ireo fakan-tsary dia manampy amin'ny fanomezana ireo rehetra ireo sy ny sazy mety hapetraka.
Famahana ny trangan-javatra sy fitarainana voasonian'ireo manamboninahitra: misy ny fotoana misintona ny fiampangana amin'ny polisy ary lasa sarotra ny mitsara izay milaza ny marina. Miaraka amin'ny cam cam body, dia tena mora ny misoroka sary an-tsaina izay mety hanala ny iray amin'ireo ankolafy roa tafiditra amin'izany. Ny fananana porofo toa an'izany dia mety hanome rakitra marina kokoa momba ilay zava-nitranga.
Hetsika amin'ny mpiandraikitra: Ny fivoaran'ny ankapobeny ataon'ireo manamboninahitra dia mihatsara be tokoa satria mitombo ny fahatsiarovan-tena, ary eo amin'ny fitondran-tena tsara hatrany ny tompon'andraikitra ka manentana ny fitondran-tena tsara amin'ny fotoana rehetra. Ny fanaovana ny fampiofanana ho an'ny manampahefana sy ny fitsipika dia mahomby kokoa sy tsy dia matotra.
Fomba fihevitra sy soso-kevitra
Zava-dehibe ny manangana masoivoho mamolavola politika voasoratra feno mialoha ny fampiharana ny programa fakan-tsary mifono vatana. Ny fananana ireo politika ireo dia mitarika ny fampiasana ireo fakan-tsary mifono vatan'olona izay mety hitranga, ny olana dia mety hitranga avy amin'ny fampiharana ny cam body satria be dia be ny olana, indrindra ny olan'ny fiainana manokana. Raha mihodina ireo politika ireo dia tsy maintsy ilaina manokana izy ireo mba hanomezana fitarihana mazava sy tsy miovaova fa amin'ny ankapobeny dia manome alàlana hanitsy ny fandaminana raha vao mivoatra ny fandaharana. Mandritra ny fampandrosoana ny politika, zava-dehibe tokoa ny fananana fifanarahana sit-in miaraka amin'ny mpanara-maso, mpanolotsaina ara-dalàna, sendika ny polisy, mpampanoa lalàna, vondron-kery ary ireo tompon'andraikitra amin'ny làlana voalohany satria ilaina izany. Anjaran'ny masoivoho ny manome ny pôlitika ho an'ny daholobe.
Maro ny ahiahy aterak'ireo fakantsary miakanjoam-batana satria tsy maintsy mandray an-tànana ny masoivoho rehefa mamolavola ny politikany. Iray amin'ireo fiantraikany maro tokony hotsimbihina ny momba ny tsiambaratelo sy ny fifandraisana eo amin'ny fiaraha-monina, ny fanantenana nateraky ny fakan-tsary niompanan'ireo manamboninahitra ao amin'ny laharam-pahamehana hiatrehana andraikitra ary avy eo dia ny vidiny ara-bola. Ireto manaraka ireto dia ny soso-kevitra mifototra amin'ny fikarohana momba ny PERF sy ny biraon'ny polisy. Ny masoivoho misambotra azy ireo dia tokony hifanaraka amin'izay ilainy, loharanon-karena, takiana ara-dalàna ary koa ny fomba fijeriny. Ireto torohevitra ireto dia:
Ny tompon'andraikitra dia tokony avela hijery ny sary mihetsika momba ny tranga iray izay mitarika azy ireo alohan'ny hanaovana fanambarana momba ireo tranga, matetika ny polisy manara-maso firaketana an-tsary matetika dia manampy ny fahatsiarovana sy ny antontan-taratasy misimisy kokoa momba ny tranga izay nitranga. Ny firaketana ny tena fotoana dia raisina ho porofo tena tsara indrindra satria ny zavatra noraketinao dia hita avy hatrany ary tsy tratran'ny adin-tsaina. Ny ankamaroan'ny mpiasan'ny polisy avy amin'ny PERF izay nipetraka mba hanome izany fahazoan-dalana izany dia nanaiky ny tompon'andraikitra tamin'ny fangatahana alalana hamela azy ireo handinika ireo toe-javatra ireo. Ity hetsika rehetra ity dia ny hiantohana ny porofo tsara kokoa amin'ny mazava.
Ny politika dia tsy maintsy milaza ny halavan'ny fotoana hitahirizana ny angon-drakitra voatahiry rehefa manasokajy ny sary dia tsara indrindra raha sokajin'ireo tompon'andraikitra amin'ny karazan-javatra misy azy ireo, io no iray amin'ireo fomba fanasokajiana tsara indrindra. Raha ny faharetan'ny fotoana azo tazomina sary voaporofo dia tsaraina amin'ny fanapahan-kevitry ny lalàna mifehy an'io faritra io. Raha ny antontan-kevitra tsy porofo dia tokony hodinihin'ny masoivoho fa ilaina ny mitahiry ny sary mba hampiroborobo ny mangarahara ary koa hamotopotorana ny fitarainana, ny ankamaroan'ny PERF dia nanaiky hitazona ny angon-drakitra mandritra ny 60-90 andro alohan'ny hamafana azy.
Ireo mpiandraikitra tsy mirakitra sary amin'ny fakantsary ny hetsika izay takian'ny politikan'ny departemanta mba ho voarakitra dia tsy maintsy miteny raha voarakitra ny antony tsy nitondrany ny firaketana zava-dehibe toa izany., izany dia fomba iray hitazona ny manampahefana ho tompon'andraikitra amin'ny asany. Manampy ny tompon'andraikitra koa izy ireo hanadihady tsy fanarahan-dalàna izay heveriny fa mety hitranga. Lasa fitakiana fahita matetika eo amin'ny fitsarana izao, fa ny fandraisam-peo amin'ny horonantsary dia tsy maintsy atolotra, ka mametraka ao anaty tahirin-kevitra ny antony tsy handraisana horonantsary dia afaka manampy manala ny ahiahy momba ny fahatokisan'ny manampahefana toy izany.
Andrasana ny tompon'andraikitra amin'ny fahazoan-dàlana avy amin'ireo niharam-boina alohan'ny zava-bita nifanaovana taminy, Dingana iray manan-danja tokoa ny fangatahan'ny manampahefana alalana hisoratra anarana. Tena tsy afaka mandeha hiakatra amin'ny mpamono fotsiny ianao vao manomboka manadihady ary rehefa manao an-tsoratra izany. Ity fihetsika diso ity izay mety hiteraka raharaham-pitsarana, ary hisarika olana matotra. Tokony hialana izany ary tokony halaina foana ny fahazoan-dàlana.
Amin'ny fahazoan-dàlana tsy dia voafetra, ny tompon'andraikitra dia tsy maintsy mametraka hatrany ny fakantsariny rehefa mamaly ny rehetra amin'ny antso serivisy ary mandritra ny fotoana anaovana ny fampiharana ny lalàna sy ny hetsika rehetra izay mety hitranga raha miasa ny manampahefana. izay politika rehetra ampiharina dia tokony hamaritana izay hetsika tafiditra ao amin'ny firaketana fakan-tsary, toy ny; fisamborana, fisavana ary koa famotorana. Na oviana na oviana ny tompon'andraikitra tsy mahazo antoka na handray an-tsoratra na tsia, dia tsara indrindra raha mitantara izy. Mety ho voafafa foana izany taty aoriana, maro ireo masoivoho mahalala fa tsy azo atao na tsy azo antoka mihitsy ny mirakitra an-tsoratra amin'ny toe-javatra henjana loatra ka mangataka azy ireo hanao tatitra amin'ny endrika fanoratana izy ireo na azo angatahina hiteny amin'ny fakantsary. Ireo antontan-taratasy ireo dia azo ampiasaina hanamarinana azy ireo hanovana rehefa nantsoina hiaro ny zavatra nataony izy ireo.
Ny paikady vita dia tokony hampidirina amina fitantanana data ary izay azo atao aminy raha vao miditra aminy, tokony hisy ny fepetra hisorohana ny fanodinkodinana angon-drakitra, mamafa, na ny fandokoana aza ampiasaina raha tsy misy fanamarinana mety. Ireo angon-drakitra ireo dia saro-pady ary tokony hokarakaraina na izany na tsy tokony ho azon'ny olon-kafa afa-tsy izany. Tena mitsikera be ny fiarovana fa azo antoka sy miaro ny fitambaran-dahatsary. Ny paikady sasany mety hiasa mba hiantohana izany dia ny: ny fampiasana rafitra fitahirizana data izay misy làlan-java-miorina tsy an-kiato, miangavy ny mpanara-maso rehefa misintona rakitsoratra iray izay nahatonga ilay mpiangavy nangatahana ary voarohirohy ny fikarohana fikarohana forensic momba ireo famerenana natao momba an'io horonantsary horonantsary.
Ny masoivoho dia tsy maintsy manana protocol manokana izay tsy maintsy mifanaraka sy mazava rehefa mivoaka ny rakitsoratra voarakitra ivelany raha mamoaka horonantsary mivantana ho an'ny daholobe na ho an'ny mpanao gazety dia tsy maintsy manaraka ny lalàna ao amin'ny fanjakana ny masoivoho. Tsiahivina fa ny politikam-pifandraisana midadasika dia tsy maintsy hampiharina mba hampandrosoana ny fandraisana andraikitra sy mangarahara. Saingy, tena ilaina ny handraisan'ny masoivoho ny olan'ny tsiambaratelo alohan'ny hanapahany ny famoahana rakitsoratra ho an'ny daholobe. Ny maro amin'ireto politika ireto dia tokony hampidirina amin'ny fisorohana ny fidirana horonantsary tsy nahazoana alàlana na ny famotsorana aza.
Mitombo haingana ny fandaharam-pandraisam-peo hita maso any amin'ireo masoivoho, ireo pôlitika ary ilaina ireo torohevitra ireo mba hitarihana ireo zavatra amin'ny làlana marina.
Fandaharana fakan-tsary sy kilasy famokarana vatana no farany niova: Desambra 3rd, 2019 by Admin
4212 Total Views 6 Views Today